Global Voices teny Malagasy » Lalao Olaimpika: COVID-19 vao mainka nanalalina ny hantsana eo amin’i Amerika Latina sy ireo firenena manankarena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Aogositra 2021 5:48 GMT 1	 · Mpanoratra Connectas Nandika (en) i Emma Dewick, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Fampandrosoana, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, COVID-19
Víctor Diusabá Rojas no nanoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny CONNECTAS , ary dika nokiraina no averin'i Global Voices avoaka.
Vitsy kokoa fa atleta 230 no nalefan'i Amerika Latina ho any Tokyo raha oharina amin'ilay Lalao Olaimpikan'ny Lohataona natao teo aloha tao Rio. Na eo aza izany, marobe ireo mpifaninana avy any Amerika Latina no nahazo medaly nandritra ireo andro vitsy nanombohan'ireo Lalao tamin'ity taona ity, isan'ireny ilay Ekoatôriàna mpihazakazaka am-bisikilety Richard Carapaz , ilay Kôlômbiàna mpibata fonjamby Luis Javier Mosquera , ireo Meksikàna Luis Álvarez Murillo  sy Alejandra Valencia , miampy ireo Breziliàna Rayssa Leal , ilay vao 13 taona monja fantatra amin'ny hoe ‘Fadinha’ na ‘The Little Fairy,’ Kelvin Hoefler  ary Daniel Cargnin .
Fahombiazana lehibe io, satria tsy raharaha mora ny fahazoana medaly olaimpika. Nandritra ireo Lalao Olaimpika 2016  tao Rio de Janeiro, (86 monja) latsaky ny antsasak'ireo firenena 205 nifaninana, no nahazo medaly.
Ilay Ekoatôriàna mpihazakazaka am-bisikilety, Richard Carapaz, nahazo medaly volamena tsy nampoiziny tamin'ny hazakazaka an-dalambe tao Tokyo. Taorian'ny fandresena, nitaraina izy hoe tsy nahazo tohana avy amin'ny firenena niaviany . Sary: Wikimedia Commons .
Ny valiny voalohany dia hita ao anatin'ireo vokadratsy nandravaravan'ilay valanaretina. Tamin'ny Mey 2021 lasa teo, hoy i Carissa F. Etienne, Talen'ny Pan American Health Organisation (PAHO), nihoatra ny iray tapitrisa ireo fahafatesana nateraky ny COVID-19 tao Amerika Latina. Iray volana taty aoriana, ny Jona, olona 37 tapitrisa no voa, tarehimarika manome ny efa ho fitambaran'ny isan'ireo vahoaka ao Pero sy El Slavador. Amin'ny lafy toekarena, hoy ny Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) – Kaomisiôna ara-toekarena ho an'i Amerika Latina sy Karaiba, teo anelanelan'ny 2019 sy 2020, tafakatra ho 79,3 isanjato amin'ny harinkarena faobe ny trosan’ ilay faritra, raha 68.9 isanjato izany taloha. Ary tsy resahana ao anatin'io ny trosa izay hivangongo manditra ity taompiasana mbola tsy mifarana ity. Ho an'ny ECLAC, amin'ireo faritra andalam-pandrosoana rehetra dia i Amerika Latina no be trosa indrindra, eo ambonin'i Azia, Afrika ambanin'i Sahara, ny ao Afovoany-Atsinanana, Azia Afovoany, Eorôpa, mifanaraka amin'ireo laharana ireo. Raha fehezina, namely mafy tokoa an'i Amerika Latina ny COVID-19, tsy toy ny tany amin'ireo faritra hafa teto an-tany.
Tsapa tamin'ny fanatanjahantena ihany koa io fiantraika io. Raha ny marina, voatery namoy ny nofinofiny handeha hifaninana any Tokyo io atleta tratry ny valanaretina, na dia nahazo toerana iray ho amin'izany aza ry zareo. Isan'izany ireo Meksikàna mpilalao baseball, Héctor Velázquez  sy Sammy Solís , ilay Shiliàna mpiangaly taekwondo, Fernanda Aguirre  ary ilay Kôlômbiàna mpihazakazaka am-bisikilety, Daniel Felipe Martínez .
Nandritra ny valanaretina, lasa zavatra nahazatra ny mahita eny anaty media sy tambajotra sôsialy ireo sarina  atleta sy ireo maniry ny ho tompondaka mametraka habaka ho fanazaran-tena any an-tranony. Fantatr'izy ireo, sy ireo mpanazatra, fa mety tsy ho ampy hahazoana medaly volamena ireny ezaka ireny. Vao haingana ireo atleta kiobàna no niresaka  momba ny fomba nataon-dry zareo namadihana ny tafon-tranony ho toerana fanaovana fanatanjahantena.
Marina ny hoe tena tsapa be mihitsy ankehitriny ny fitarihan'ireo “Tontolo Voalohany” manerana an'i Amerika Latina. Na izany aza, nilaozan'ny vintana hatrany ireo firenena avy amin'ny tany mahantra indrindra teo amin'ny tantaran'ireo Lalao Olaimpika, endri-javatra iray nohararaotin'ireo firenena matanjaka hatrany hahazoana tombony. Farany, ireo atleta ao Amerika Latina dia niatrika fanamby mitovy amin'ny an'i Luis Subercaseaux , ilay hany Shiliàna nisoratra hifaninana tamin'ny hazakazaka am-bisikilety sy ny atletisma nandritra ireo lalao voalohany tanatin'ny vaninandro maoderina tao Athènes tamin'ny 1896. Kanefa, tsy misy mahafantatra raha tena nandray anjara tokoa izy satria tsy mba nivoaka teny anatin'ireo rejisitra ofisialy. Sy toy ilay Kiobàna mpilalao sabatra, Ramón Fonst , izay nahazo medaly volamena sy volafotsy tany Parisy tamin'ny 1900. Notohizan'ireo firenena avy ao Amerika Latina ny fifaninanana mba hahazo voninahitra olaimpika ao Tokyo. Na izany aza, na teo ireo fifoforana mafy sy ny fahavononany, dia ny latabatry ny medaly ihany no manapakevitra momba ny amin-dry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/08/29/153757/
 Richard Carapaz: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Carapaz
 Luis Javier Mosquera: https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Javier_Mosquera
 Luis Álvarez Murillo: https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_%C3%81lvarez_(archer)
 Alejandra Valencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Valencia
 Rayssa Leal: https://en.wikipedia.org/wiki/Rayssa_Leal
 Kelvin Hoefler: https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin_Hoefler
 Daniel Cargnin: https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cargnin_(judoka)
 Lalao Olaimpika 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Refugee_Olympic_Team_at_the_2016_Summer_Olympics
 tsy nahazo tohana avy amin'ny firenena niaviany: https://www.primicias.ec/noticias/jugada/richard-carapaz-apoyo-ecuador-oro-juegos-olimpicos/
 Wikimedia Commons: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Carapaz#/media/Archivo:Medalla-carapaz-696x685.jpg
 iray tapitrisa : https://www.paho.org/es/noticias/21-5-2021-america-latina-caribe-superan-millon-muertes-por-covid-19
 Héctor Velázquez: https://www.infobae.com/america/deportes/2021/07/20/hector-velazquez-el-primer-atleta-mexicano-que-se-perderia-tokio-2020-por-covid-19/
 Sammy Solís: https://www.latimes.com/espanol/deportes/articulo/2021-07-19/la-seleccion-olimpica-de-beisbol-de-mexico-sufre-dos-casos-de-la-covid-19
 Fernanda Aguirre: https://www.epicentrochile.com/2021/07/20/fernanda-aguirre-tras-ser-positivo-de-covid-19-y-quedar-fuera-de-las-olimpiadas-estoy-destrozada/
 Daniel Felipe Martínez: https://www.futbolred.com/juegos-olimpicos/daniel-felipe-martinez-no-va-a-los-juegos-olimpicos-ciclismo-140533
 Luis Subercaseaux: https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Subercaseaux
 Ramón Fonst: https://en.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Fonst